हजारौं बर्षदेखि हिउँभित्र गडिएको यो भाइरस यदि बाहिर निस्कियो भने निम्तिनेछ कोरोनाभन्दा पनि महाप्रलय - नेपाल कुरा
हजारौं बर्षदेखि हिउँभित्र गडिएको यो भाइरस यदि बाहिर निस्कियो भने निम्तिनेछ कोरोनाभन्दा पनि महाप्रलय
एजेन्सी । कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्दै जाँदा पृथ्वीको तापक्रम पनि बढ्दै गइरेको छ । हरितगृह ग्याँसहरूमा निरन्तर बृद्धिका कारण पृथ्वीको औसत तापक्रम बढ्न थालेको छ । यसको कारणले हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन् । यसले पृथ्वीको जलचक्रलाई मात्र असर गरिरहेको छैन । अर्कोतर्फ, ठूलो खतरा पनि देखा परिरहेको छ । यो त्यो कारणले कि हिमनदीहरू भित्र लुकेका अज्ञात भाइरसकहरु हिमनदी पग्लिने क्रममा पुनः सक्रिय हुन सक्दछ ।
हालै अमेरिकी वैज्ञानिकहरूको एउटा समूह हिमनदी भित्र गाडिएका भाइरसहरूको अनुसन्धान गर्न तिब्बत गएका थिए । उनीहरुले त्यहाँबाट नमूनाहरू संकलन गरे र अनुसन्धानमा पत्ता लगाए कि उक्त ग्लेशियरभित्र २८ प्रकारका जीवित भाइरसहरू समावेश थिए । जुन १५ हजार वर्षदेखि उक्त बरफमुनि गडिएको थियो । वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान पछि पत्ता लगाए कि यी धेरै खतरनाक भाइरस हो । ती भाइरसहरु अलग अलग मौसममा पनि बाँच्न सक्षम रहेको शोधकर्ताहले पत्ता लगाए । यस्तो अवस्थामा यदि तिनीहरू पछि सक्रिय भयो भने नतीजा अत्यन्तै भयानक हुनेछ । लाखौं मानिसहरूको ज्यान पनि जान सक्दछ । हामी अहिले तीनीहरूसँग लड्न कुनै पनि हालतमा सक्षम छैनौँ । हाम्रो हार निश्चित छ ।
अन्वेषकहरूले यो पनि रिपोर्ट गरे कि आज अन्टार्कटिकाको हिमनदी पहिले भन्दा धेरै द्रुत गतिमा पग्लिरहेको छ । यस हिमनदीमा यति धेरै भाइरसहरू लुकेका छन्, जसले भोलि पृथ्वीमा भयानक महामारी ल्याउन सक्दछ । यो महामारी आजको कोरोना भाइरसको महामारीभन्दा बढी खतरनाक हुनेछ ।
हालै केही महिना अघि उत्तराखंडको चमोलीमा हिमनदी पग्लिएको खबर आएको थियो । भारतको यस क्षेत्रमा धेरै हिमनदीहरू छन् । वातावरणविद्हरुका अनुसार लगातार बढ्दो तापक्रमका कारण पग्लिने गति पहिले भन्दा धेरै छिटो भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा, हिमनदी भित्र गडिएको भाइरस पग्लेर नदीमा नदीमा मिल्न सक्दछ । यसका कारण यी भाइरसहरू नदीको माध्यमद्धारा देशभर फैलिन सक्दछ , जसका कारण भारतमा गम्भीर महामारीको जन्म हुन सक्दछ ।
वर्तमान समयमा सारा विश्व कोरोना महामारीको साथ जुधिरहेका छन् । महामारी के हुन्छ ? अब सबैलाई थाहा हुँदैछ । यसको गम्भीर नतिजा के हुन्छ? यी आज हाम्रो आँखा अगाडि घुमिरहेको छ । दैनिक हजारौंको जीवनलीला यस संसारबाट हराइसकेको छ । करोडौं मानिसहरूले आफ्नो जागिर गुमाएका छन् । मानिसहरु सीमित भएका छन् । के घर? के बाहिर ? सबैतिर शोक छाइरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा ग्लोबल वार्मिंगको दोस्रो खतरा हाम्रो अगाडि उभिरहेको छ । पृथ्वीको तापक्रम निरन्तर बृद्धि भइरहेको छ । यदि यसरीनै बढिरहने हो भने विश्वका धेरै ठूला ठाउँहरू जलमग्न भएर डुब्नेछन् । कार्बन डाइअक्साइडको कारण, जलचक्र पूर्ण रूपमा खस्कनेछ । यसको असर कृषि क्षेत्रमा पनि देखिनेछ । धेरै बालीहरुलाई नोक्सान हुनेछ । गम्भीर भोकमरी पनि हुन सक्दछ ।
चितवनमा कुखुरालाई रोग लाग्दा ६० लाख बराबरको क्षति
अक्सिजनका भरमा कोरोनासित जुध्दै संक्रमित